Nhau - Jiangsu Yuanfang Power Technology Co., Ltd
Jiangsu Yuanfang Power Technology Co., Ltd. Bidding chiziviso
1. Changzhou itsva base kure hofisi chivakwa chikamu I decoration chirongwa
Nzvimbo yekuvaka yechivako chehofisi yeprojekti inenge 15000 square metres.Kushongedza kwechikamu chechikamu I ndiyo nzvimbo yepakati pechivako chikuru chehofisi.Nzvimbo yekushongedza inenge 2000 square metres;Uriri hwekutanga hwakareba 4.5m uye uriri hwechipiri hurefu 3.5m.Iyo yemaitiro fomu ndeyekongiri furemu chimiro.Decoration standard: kushongedzwa kwakapusa, chimiro chemazuva ano maindasitiri, nezvimwe.
(2) Nguva yekuvaka yeprojekiti mazuva makumi maviri
2.Zvinodiwa kune vatengesi vekutengesa
(1) Zvinodiwa zvekukodzera zveanobhadhara:
mutengi ane hunhu hwakazvimirira hwemutemo;Iye akapihwa mumiriri wekubhidha anofanira kunge aine simba regweta remunhu ari pamutemo webhizinesi.
mubhidhiri akapasa ISO9001:2000 quality management system certification uye ane giredhi II kana pamusoro pehunyanzvi hwekushongedza engineering.
Mabhizinesi ekuvaka;Iva neanoenderana hydropower kuvaka qualification.
kuve nerezinesi rakapihwa nedhipatimendi rekugadzira rehurumende riri kana pamusoro pedanho repurovhinzi;
vakazvimiririra vakapedza ruzivo rwekuvaka rwakafanana nechiyero uye chimiro chechirongwa chekubhidha mumakore mashanu apfuura;
maneja wepurojekiti anotsanangurwa achave akanyoreswa kirasi II akanyoreswa muvaki ane makore mashanu kana kupfuura ruzivo mukuvaka kwakafanana kweinjiniya;
mamiriro emari ebhizinesi anga akanaka mumakore matatu apfuura.
kukwanisa kuita zvakadzama dhizaini yeprojekiti.
mutengi wepurojekiti haagamuchire iyo yejoint venture bid.
(2) Zvitupa zvinotevera zvichapihwa paunenge uchitenga magwaro ekubhidha:
kopi yepakutanga yerezinesi rebhizinesi reanobhidha, nemakopi akachengetwa;
kopi yepakutanga yechitupa chekukodzera kwemubhadhari, nemakopi akachengetwa;
simba regweta kana tsamba yenhanganyaya yekutenga magwaro ekubhidha akapihwa nemumiriri wemutemo wemubhadhari;
chitupa chemunhu anobata magwaro ekubhidha achatengwa uye kopi ichachengetwa.
(1)Kuunganidzwa kwebhidhi uye ongororo yeprojekiti:
magwaro ekubhidha achagamuchira magwaro ekubhidha epurojekiti, mifananidzo uye zvimwe zvinhu zvakakosha padhipatimendi rekugadzira nekushanda paNhamba 37, Qinglong West Road, Tianning District, Changzhou na9:00 ~ 11:00 am na14:00 ~ 16: 00 pm (nguva yeBeijing, yakafanana pazasi) zuva rega rega kubva muna Mbudzi 2, 2020 kusvika Mbudzi 3, 2020. Mutengo weseti yega yega yezvinyorwa mazana mashanu emayuan chete, uye magwaro ekubhidha haadzorerwe mushure mekutengesa.Mutengi anogona kukopa faira remagetsi regwaro rekubhidha ne USB flash disk kana mobile hard disk.
muridzi acharonga ongororo yesaiti uye kuita musangano wepamberi panguva nenzvimbo inotevera.
Nguva yeongororo yesaiti: kubva muna Mbudzi 3 kusvika Mbudzi 4, 2020, mutengi achatungamira timu kunzvimbo inoongororwa saiti, uye chekufambisa chinodiwa pakuongorora nzvimbo chichagadziriswa nemutengi.
(2) Kutumira mabhidhi uye hurongwa hwekuvhura:
zuva rekupedzisira rekuti mutengi agamuchire magwaro ematenda ndi10:00 am musi waNovember 18, 2020. Ndokumbira utumire magwaro ematenda kudhipatimendi rekugadzira nekushanda rekambani iri kure nguva ino isati yasvika, uye magwaro ematenda akaunzwa mushure menguva ino haazo. kugamuchirwa.Mubhadhari achaendesa vimbiso yebhangi yebhidhiri muchimiro chakatsanangurwa mugwaro rekubhidha panguva imwe chete kana achiendesa magwaro ebhidhi.Mapepa ebhidhi anotadza kuendesa vimbiso yekubhidha anorambwa.
magwaro manyoro akagadzirwa nemutengi achasungwa kuita vhoriyamu, akakamurwa kuita makopi maviri, yekutanga neyechipiri, uye oiswa mubhegi regwaro, uye bhegi regwaro richanamwa nechisimbiso chepamutemo chechikamu.
kuvhurwa kwechirongwa ichi kuchaitwa na10:00 mangwanani musi wa19 Mbudzi, 2020 mukamuri remusangano 2F, No. 37, Qinglong West Road, Tianning District, Changzhou City.
mushure mekuvhurwa kwebhidhi, muridzi wematenda anozoongorora hunhu hweanokodzera, uye mutengi anozoongorora chete magwaro ebhidhi evanokwikwidza vanenge vapasa ongororo yezvinokodzera.
4. Dzimwe nyaya dzekuwedzera
(1) maneja wepurojekiti anotsanangurwa uye injinjiniya mukuru weanobhadhara anofanira kutora chikamu muhurongwa hwese hwekubhidha, sekushanya kwesaiti, musangano wepamberi, kugadzirira bhidhi, musangano wekujekesa uye nhaurirano yekondirakiti.
(2) mutengi anofanira kunyatsotevedzera uye kuita mirairo pamusoro pekutonga kweprojekiti, maneja maneja weprojekiti uye mamwe matanho ekuvaka ekuvaka eprojekiti anopihwa kana kupihwa.
Jiangsu Yuanfang Power Technology Co., Ltd. (kubhidha ruzivo webhusaiti:http://www.pistoncn.com)
Kambani email: yf_qa001@163.com
Bata: Fang Huige Tel: 0519-85353799
Kero yekambani: Nhamba 37, Qinglong West Road, Tianning District, Changzhou City, Jiangsu Province